Nezvedu - Putian Guta Handsome Imba Yekushongedza Co, Ltd.
Handsome Kumba Kushongedzwa iri muPutian Guta, iro riri kumahombekombe eguta kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweChina, rakagadzwa muna 1998, iro rinoita hunyanzvi muhunyanzvi hwe 3D simbi. Kusvika ikozvino, pane mana akateedzana sekutevera:
1) CHB (yakajeka aluminium pendi)
2) HB (aruminiyamu kupenda)
3) LH (aluminium relievo, inova musanganiswa wekupenda kwemafuta uye chivezwa chealuminium).
4) kupenda kwe LED
Fekitori yedu inofukidza 8000 mativi emamirimita uye 1000 mativi emamirimita muyero kamuri. Tinonamatira musimboti we "mhando yekutanga, sevhisi kutanga, kuenderera kuvandudza uye hunyanzvi kusangana nevatengi chinodiwa.
Chii chinonzi 3D simbi yemafuta kupenda
3D simbi yemafuta kupenda chinhu chitsva kwazvo chigadzirwa, ruoko rwependi pabrashi yealuminium ndiro.Yakasiyana nemidziyo yekudhirowa, simbi idzo dzine simba resimbi pfungwa uye yakapfuma 3D inoratidzira mhedzisiro mumwenje, kunyanya yakakura yemukati meimba, hotera, hofisi uye zvichingodaro. pamusoro pekushongedza.
Iyo aruminiyamu pamusoro yakave yakakwenenzverwa nguva nenguva mushure mekupenda. Tsinga dzakanaka pane aruminiyamu bhodhi dzinoda kukwenenzverwa kakawanda kuti dziite senge dzakadzikama uye dzakanaka.
Aluminium bhodhi kupenda ndicho chigadzirwa chitsva uye chakawedzerwa chigadzirwa kubva kualuminium kupenda.
Yakakwenenzverwa aruminiyamu bhodhi pamberi peru pendi pabhodhi, uye vhara iyo yakajeka yekupfeka kuti pendi ipenye uye yakakwana.
Dzinenge dzakatenderedza makumi matatu magadzirirwo angagadziridzwa mwedzi wega uye ese anoiswa mukamuri yekuenzanisira, iyo inovhara 1000 mita mita Unogamuchirwa kutishanyira.
HANDSOME ARTS anopinda kuCANTON FAIR uye mamwe maFenicha eFesheni gore rega, achizivisa zita uye zvigadzirwa pasirese.
Nesimba risingaregi, HANDSOME ARTS ikozvino yakunda chikwereti chakavimbika uye mukurumbira wakanaka pakati pevatengi vedu nemakwikwi ari nani. Kugamuchirwa kuwedzera bhizinesi nesu ruoko takabatana!
Manyorerwo Emuenzaniso Wemakamuri
Canton yakanaka show
Handsome imba Kushongedza ndiyo yekutanga nyanzvi inogadzira 3D simbi yemafuta kupenda muChina ine yakanakisa mhando nguva dzese.Waigona kungovimba nesu nekutenda edu akasarudzika uye ekugadzira pendi anogona kukuunzira iwe hukuru budiriro!